Aldous Huxley: Akwụkwọ | Akwụkwọ dị ugbu a
Isi iyi foto Aldous Huxley: Picryl
N'ime Aldous Huxley, anyị na-eche naanị na e nwere otu akwụkwọ, nke 'Brave New World', Otú ọ dị, nke bụ́ eziokwu bụ na odee dee ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Ma, ọ bụrụ na anyị na-arịọ gị Aldous Huxley na akwụkwọ ya, Ị nwere ike ịgwa anyị ihe ndị ọzọ na-eleghị anya na ịntanetị? O yikarịrị ka ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ike ịza ajụjụ ahụ.
Ọ bụ ya mere, n'oge a, anyị chọrọ ilekwasị anya na onye edemede ahụ, weere otu n'ime ndị na-eche echiche kachasị mkpa na narị afọ nke XNUMX. Ma ònye bụ onye edemede a? Oleekwa akwụkwọ o dere? Anyị na-agwa gị ihe niile.
1 Ọnye na-bụ Aldous Huxley
2 Aldous Huxley: akwụkwọ ndị o dere
2.2 Akụkọ ifo
2.5 Akwụkwọ njem
Ọnye na-bụ Aldous Huxley
Isi mmalite: omenala mkpokọta
Tupu ịmara nke bụ akwụkwọ Aldous Huxley, ọ dị mma ịmara ntakịrị akụkọ ihe mere eme nke onye edemede a, bụ onye site ugbu a gaa n'ihu, anyị na-agwa gị na ọ dị oke egwu.
Aldous Huxley, aha zuru oke Aldous Leonard Huxley, mụrụ na Godalming, Surrey, na 1894. Ndị ezinụlọ ya 'dị umeala n'obi' n'echiche bụ́ na a na-ahụghị ha. Ma ọ bụ na nna nna ya bụ Thomas Henry Huxley, bụ́ ọkà mmụta banyere evolushọn a ma ama. Nna ya, bụkwa ọkà mmụta ihe ndị dị ndụ, bụ Leonard Huxley. Banyere nne ya, ọ bụ otu n'ime ụmụ nwanyị mbụ kwere ka ha mụọ na Oxford, nwanne nwanyị Humphrey Ward (onye na-ede akwụkwọ na-aga nke ọma nke mechara bụrụ onye nchebe ya), na nwanne nwanne Matthew Arnold, onye na-ede uri a ma ama.
Aldous bụ nwa nke atọ n'ime ụmụ anọ. Na ihe nketa na ọgụgụ isi niile gosipụtara na ụmụntakịrị ọ bụla (nwanne ya nwoke nke tọrọ ya bụ ọkà mmụta sayensị ama ama na sayensị sayensị).
Aldous Huxley gụrụ akwụkwọ na Eton College. Otú ọ dị, mgbe ọ dị afọ 16 ọ fọrọ nke nta ka ọ kpuo ìsì ruo otu afọ na ọkara n'ihi ọgụ nke punctate keratitis, ọrịa anya. N'agbanyeghị nke a, n'oge ahụ, ọ mụtara ịgụ na ịkpọ piano na usoro ndị ìsì. Mgbe oge ahụ gachara, ọ nweghachiri ịhụ ụzọ, ma ọ nwekwara ike nke ukwuu ebe ọ bụ na o nwere ọtụtụ adịghị ike na anya abụọ.
Nke a na-eme ka ị nwee ike hapụ nrọ ya nke ịbụ dọkịta wee gụchaa akwụkwọ n'asụsụ Bekee na kọleji Balliol, Oxford.
Mgbe ọ dị afọ 22, na n'agbanyeghị nsogbu ọhụụ ya, o bipụtara akwụkwọ mbụ ya, The Wheel Burning, ebe ị ga-ahụ nchịkọta uri ndị o dechara n'ime afọ anọ nwere mpịakọta atọ: Jona, Mmeri nke Ntorobịa, na Leda.
Banyere ọrụ ya, ọ bụ prọfesọ na Eton, mana ọ kwụsịrị n'ihi na ọ naghị amasị ya nke ukwuu. Obere oge, ọ rụrụ ọrụ na magazin Athenaeum n'akụkụ otu ndị editọ. O jighị ezigbo aha ya dee, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'aha pseudonym, 'Autolycus'. Otu afọ mgbe ọrụ ahụ gasịrị, ọ ghọrọ onye nkatọ maka Westminster Gazzette.
Na 1920 ọ malitere ibipụta akụkọ mbụ ya. Nke mbụ bụ Limbo, mgbe afọ gachara, ọ ga-ebipụta The Human Wrap, My Uncle Spencer, Abụọ ma ọ bụ Atọ Graces na Fogonazos.
Mana akwụkwọ akụkọ mbụ bụ akụkọ ọjọọ nke Crome, bụ nke mere ka ọrụ ya dị ka onye ode akwụkwọ sie ike.
Mgbe akwụkwọ ahụ gachara, ọtụtụ ndị ọzọ nọgidere na-abata, nke ọ jikọtara ya na mmasị ọzọ ya, njem. Nke ahụ na-enye ya ohere ọ bụghị naanị ide n'ọtụtụ ụdị na atụmatụ, kamakwa ibi ndụ omenala dị iche iche na-eme ka ọ baa ọgaranya na nke bụ akụkụ nke ndụ ya.
Ọ bụ na 1960 ka ọrịa ahụ́ ike ya malitere n'ezie. N'afọ ahụ, a chọpụtara na ọ na-arịa ọrịa kansa ire ma were ọgwụgwọ redio dị afọ abụọ. N'ikpeazụ, na Nọvemba 22, 1963, Aldous Huxley nwụrụ na-enye doses abụọ nke LSD, ọ bụghị na-ahapụghị ntụziaka maka ihe ha kwesịrị ime: n'otu akụkụ, gụọ akwụkwọ Tibet nke Ndị Nwụrụ Anwụ na ntị ya; nke ọzọ, a na-akpọ ya ọkụ.
Aldous Huxley: akwụkwọ ndị o dere
Aldous Huxley bụ ezigbo onye edemede, ọ bụkwa ya ọ wepụrụ ọtụtụ akwụkwọ akụkọ, edemede, abụ, akụkọ ... N'ebe a, anyị na-ahapụ gị ndepụta nke anyị chọtara na ọrụ ya niile (n'ihi Wikipedia).
Anyị na-amalite na uri n'ihi na ọ bụ ihe mbụ Aldous Huxley bipụtara n'akwụkwọ. Ọ bụ ezie na ndị mbụ bụ ndị kasị ochie, e nwere oge ọzọ mgbe o dere ọzọ.
Wheel na-ere ọkụ
Mmeri nke ntorobịa na uri ndị ọzọ
Pomụ amaokwu ahọpụtara
Abụ zuru ezu nke Aldous Huxley
Ihe na-esote o bipụtara n'ihe gbasara ụdị bụ akụkọ. Nke mbụ bụ ndị o mere mgbe ọ bụ nwata. ma emesia o dekwara ole na ole ọzọ ọzọ.
Nwanne nne m Spencer
Abụọ ma ọ bụ atọ ekele
Ọchị nke Mona Lisa
Site na akwụkwọ akụkọ, Aldous Huxley nwere nnukwu ihe ịga nke ọma site na nke mbụ o wepụtara. Ma ọbụna karịa nke Brave New World, nke bụ ihe a na-akpọkarị ya. Ma e nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ. Ebe ị nwere ndepụta zuru ezu.
Ihe ojoo nke Crome
Egwu nke satyrs
Art, ịhụnanya na ihe ọ bụla ọzọ
Happywa obi ụtọ
Ndị ìsì na Gaza
Ochie swan anwụ
Oge ga -akwụsị
Enwe na isi
Genie na chi nwanyị
Isi mmalite: Obi Ụtọ
Na mgbakwunye na ihe niile dị n'elu, e nyere ya nke ukwuu inye echiche ya banyere ndụ na nsogbu site na edemede. N'ezie, ha dị oke ma ị ga-ewepụta oge iji ghọta ya, ma nkà ihe ọmụma ya n'oge ahụ bụ ihe kasị mma na taa a ghọtara ya dị ka otu n'ime ndị edemede dị mkpa nke narị afọ nke iri abụọ.
Kedu otu esi edozi ya? Nsogbu udo na-ewuli elu
Ọgwụgwụ na pụtara
Nkà nke ịhụ ihe
The perennial nkà ihe ọmụma
Sayensị, nnwere onwe na udo
Nsogbu okpukpu abụọ
Gburugburu na iche iche
Ndị mmụọ ọjọọ nke Loudun
Ọnụ ụzọ nke nghọta
Adonis na mkpụrụedemede
Eluigwe na ala mmụọ
Nleta ọhụrụ na ụwa obi ụtọ
Akwụkwọ na sayensị
Moksha. Edemede na psychedelia na ahụmịhe ọhụụ 1931-1963
Huxley na Chineke
N'ikpeazụ, na N'ijikọta mkpagharị ya na ide ihe, o nwekwara oge iji mee ụfọdụ akwụkwọ njem. N'ime ihe ndị a ọ bụghị nanị na ọ kọwara otú obodo ahụ ma ọ bụ ebe ọ gara dị ka, kamakwa o kpughere mmetụta ọ na-enwe n'ebe ọ bụla. N'ime ndị a ọ deghị ọtụtụ ihe, ọ bụ ezie na na ndị gara aga, ọ na-eji akụkụ nke njem ya na-azụ ala ndị ahụ.
N'akụkụ ụzọ: ndetu na edemede sitere na njem nlegharị anya
N'ofè Gulf of Mexico
Jesting Paịlet: Ezumike ọgụgụ isi
Ị gụrụ ihe ọ bụla sitere na Aldous Huxley? Kedu akwụkwọ ị tụrụ aro n'aka ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Aldous Huxley: akwụkwọ